China Palmitoyl Tripeptide-5 ifektri abakhiqizi | JYMed
Igama lomkhiqizo: Palmitoyl Tripeptide-5
Formula Yamamolekhula: C37H67F6N5O9
Isisindo Yamamolekhula: 839,959 g / Mol
Izicelo: isikhumba Smooth, anti-ukuguga
Palmitoyl Tripeptide-5 yakhiwa amaketango amino acid, futhi unekhono zingene epidermis bese ufaka ezijulile dermis, lapho ekhuthaza ukukhiqiza collagen nokukhula inyama ephilile. It hhayi kuphela isheshisa collagen zamagama esikhumbeni, kodwa izifundo esatholakele ibonisa ukuthi lokhu peptide futhi unekhono ukuxhumana ngokusebenzisa amangqamuzana esikhumba somuntu futhi kuvimbele ubuthi engena kubo kulimata. Isithako Lokhu kokulingisa izindlela somzimba zokuxhumana wemvelo ukuthi zitshela amangqamuzana yini okufanele uyenze. Lolu hlobo lokuxhumana kusiza isikhumba amaseli yokwehlisa ezishaywayo out ubuthi noma ilihumushe inert. isimo Palmitoyl Tripeptide-5 yemvelo ukuthi uketshezi kucace ukuthi alinaso iphunga futhi amanzi encibilikayo. Lokhu peptide kungatholakala eziningi imikhiqizo ukunakekelwa kwesikhumba, kodwa elisetshenziswe kaningi anti-ukuguga okhilimu nobuso serums. Palmitoyl Tripeptide-5 isetshenziswa eziningi imikhiqizo ehlukene anti-ukuguga ngenxa yekhono layo ukuze ukuxhumana ngokusebenzisa amangqamuzana esikhumba somuntu bese bavula zokukhiqiza i-collagen. , Isikhumba Young ezibukeka ngokuqinile akunakwenzeka ngaphandle collagen kanye amadala isikhumba sakho uthola, the collagen kancane uveza. Izinkampani ezikhiqiza anti-ukuguga serums kanye okhilimu usebenzisa Palmitoyl Tripeptide-5, hhayi nje ngoba ekutshela ngokusebenzisa amangqamuzana esikhumba somuntu zokuthuthukisa ukukhiqizwa collagen ngokwemvelo, lokhu kwenza kube ephumelela kakhulu, njengoba neminye imikhiqizo aqukethe collagen kungenzeka obukhulu kakhulu ukungena kahle isikhumba . Ngenxa Palmitoyl Tripeptide-5 usebenza kusuka ngaphakathi ngaphandle ukwandisa ukukhiqizwa collagen, ungase ubone imiphumela engcono ngokushesha kunokuba uzokwenza uma wasebenzisa ukhilimu noma umutsi equkethe collagen kusukela izicubu isilwane. Nakuba ucwaningo mayelana Palmitoyl Tripeptide-5 zisekhona zabanjwa, zimbalwa imibiko yimiphi imiphumela emibi ngokuphathelene nalokhu peptide. Nokho, uma une isikhumba ebucayi, ungase basabela umkhiqizo anti-ukuguga equkethe lokhu peptide. Ezinye ukusabela ezivamile iguliswa kukhona reddening kwesikhumba, kabuhlungu endaweni isicelo, futhi ukuqubuka. Uma uhlangabezana nanoma iziphi kulezi zindaba ngenkathi usebenzisa umkhiqizo anti-ukuguga equkethe Palmitoyl Tripeptide-5, kumele uxhumane wesikhumba wakho zisuka nje ukuze uthole ukuthi iqondeni noma cha peptide ebangela ukusabela noma uma omunye umkhiqizo jikelele kungaba isinqumo esihle ngoba wena. "Ubuqotho, Ubuchule, Rigorousness, futhi Efficiency" iyona ebamba isisu ephikelelayo ukuzimelela kwethu ngenxa yesikhathi eside ukwakha ngokuhlanganyela kubathengi reciprocity mutual umvuzo ezazinalo Isitolo esidayisa yonke impahla Inani Muhle Raw Material Skin Elungisa Palmitoyl Tripeptide-5 / Syn-Coll / Pal-kvk Powder, ukwesekwa yakho amandla yethu yaphakade! Ngomusa amakhasimende wamukelekile ekhaya aphesheya ukuvakashela inkampani yethu. "Ubuqotho, Ubuchule, Rigorousness, futhi Efficiency" iyona ebamba isisu ephikelelayo ukuzimelela kwethu ngenxa yesikhathi eside ukwakha ngokuhlanganyela kubathengi reciprocity mutual umvuzo ezazinalo Palmitoyl Tripeptide-5, Palmitoyl Tripeptide-5 Powder, Syn-Coll, Wena njalo ungathola imikhiqizo kanye nezixazululo udinga ukuba enkampanini yethu! Siyakwamukela ukubuza nathi mayelana umkhiqizo wethu noma yini esiyaziyo futhi singasiza e auto izingxenye ezisele. Sibheke phambili ukusebenza nawe okwesikhathi nongenza.
Okulandelayo: Palmitoyl Tetrapeptide-7